true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html read 5 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Amacebo amaningi angabhalwa ukuze kufezekiswe izinto ezifunwayo, kepha lokhu kuyizinhlelo nje. Lezi zinhlelo ngeke zigcwaliswe kuze kube yilapho “nini futhi kanjani futhi ngobani” kusetshenzelwe ngaphandle, kwahlelwa, kwavunywa noma kwavunyelwana ngakho.
Lokhu yingakho why ukuhlela kwesinye isikhathi kucatshangwa ukuthi kunzima kakhulu, akunaso isidingo noma kuchitha isikhathi.
Ungahlelela ukwenza amadola ayisigidi kodwa uma unini, kanjani futhi ubani kungabhalwanga efomini lohlelo njengethagethi yezinhlobo ezahlukahlukene, ngeke kwenzeke.
Isibonelo, icebo elihle kakhulu elisetshenziswayo elikhombisa ukuthi ungaguqula kanjani itheku (indawo evikelekile yamanzi ukuthi imikhumbi ingahlala kuyo) iye endaweni yemikhumbi emikhulu kakhulu ephethe uwoyela. Kungaba kwimidwebo nakho konke okubekwe kahle futhi kungahle kube namamodeli yawo. Iminyaka eyishumi iyadlula futhi ayikaze iqalwe. Kungenzeka ukuthi ubonile amacebo anjalo. Iningi lazo liboniswa emifanekisweni yomhlaba (emicimbini emikhulu yomphakathi lapho amazwe evela emhlabeni wonke akhombisa ubuciko bawo, ubuciko, imikhiqizo yezimboni nezolimo, inqubekela phambili yesayensi, njll.).
Noma kungaba necebo e-targeted ngqo kwifomu lohlelo, olufaka phakathi unini, kanjani futhi ubani, kepha alusoze lwaphela ngoba amathagethi alukhuni ukuwenza noma bekungewona aweqiniso.
Futhi ungaba necebo elingenayo I-TARGET ENEMIBANDELA (i-target elenziwa ukuthola imininingwane, noma uma kungenziwa iphrojekthi, nokuthi ingenziwa kuphi, njll.). Ngaphandle kwe-target enjalo ekuqaleni, kungavela ukuthi akekho umuntu obelifuna ngempela futhi alinasizo, ngakho-ke kungenzeka ukuthi alisoze laqedwa.
Into enjalo yayikhona esiqhingini esiseduzane kwe-Greece. Kwakuyinkundla yemidlalo yeshashalazi eqedwe uhhafu ezinkulungwaneni zeminyaka eyedlule eyayisanda kushiywa kanjalo. Akekho owabuza abantu ukuthi bayayifuna yini noma ngabe iyadingeka. Ngakho-ke noma ngabe yayihlelwe kahle futhi i-targeted ngokwengxenye futhi inohhafu ongaphelele, lapho yayisiqedwe uhhafu. Futhi kwasala kunjalo.
Icebo lingabuye lube ngumdwebo noma umfuziselo (ikhophi elincane kuna leyo yangempela) lento noma endaweni ethile noma iphrojekthi. Lolu hlobo lwecebo kufanele lwenziwe nganoma yiluphi uhlobo lokwakha—ukwakhiwa kwehluleka ngaphandle kwalo. Ingahle ilunge njengecebo.
Kepha uma icebo lenziwe ngaphandle kwe-target enemibandela, lizoba yinto engenamsebenzi noma ngeke ilunge. Ezinye zezizathu why icebo lingenzeki kungaba ukuthi ayikho imali evunyelwe ukulenza, uma kungekho-muntu oyaliwe ukuba alenze noma uma lingahlelwanga.
Lapho umuntu enze khona icebo nohlelo oluzodinga ukuvunywa, kuzofanela aveze imininingwane elandelayo ngalo:
1. Umphumela we-target enemibandela (inhlolovo yalokho okudingwayo futhi okudingekayo).
2. Imininingwane yento uqobo, isho isithombe sayo noma inani lomsebenzi elizobandakanyeka kukho, futhi nokuthi kungaba lula noma kube nzima kangakanani ukukwenza futhi nabantu noma izinto zokwakha.
3. Ukusho ukuthi kubaluleke kakhulu noma nje kuwusizo.
4. Ama-targets ayisisekelo, okubonisa i-organization ebidingeka ukukwenza (i-organizational, abasebenzi nezinyathelo zokuxhumana).
5. Ama-targets asebenzayo abonisa isikhathi esithintekayo nokuthi sivumelana kanjani nezinye izinto (lezo ezibeka izinkomba nezenzo noma nohlu lwezenzakalo noma uhlelo lwezikhathi).
6. Izindleko zayo nokuthi izozikhokhela yona ngokwayo noma ingakhokhelwa noma ukuthi izokwenza malini.
Uhlelo kuzofanele lufake ama-targets.
Icebo lizoba yi-design yento uqobo.
Lokhu kukhombisa ukuthi kungani ezinye izinhlelo zingaveli kunoma yini nokuthi kungani zivame ukungapheleli, noma ngabe bezihleliwe. Kungaba yingoba icebo lalingahlelwanga nama-targets njengezinhlobo ezilungile zama-targets nangokulandelana okuyikho. Njengomphumela, icebo alilona iqiniso noma alenzeki.
Kwesinye isikhathi i-target elinemibandela alilungile futhi lokhu kungavimba icebo nohlelo ukuthi lungaphothulwa. I-target enemibandela kungenzeka ingazami ukuthola ukuthi ngabe kukhona inqinamba engavimbela icebo ukuthi lenziwe. Noma kungenzeka ukuthi ayitholi ukuthi yimaphi abantu namakhono atholakalayo.
Kodwa uma lamaphuzu eqondakala, khona-ke isihloko se-organizing nokuhlela siyacaca kakhulu. Umuntu obhala izinhlelo engaba namakhono amakhulu futhi angafinyelela kwizinto ebezingenakufinyelelwa ngaphambilini noma okungenzeka azange kucatshangelwe ngaphambili.